Raisul Wasarihi hore ee Dalka Malaysia iyo Madixi hore ee Malaliyada oo lagu Eedeeya Falal Musuqmasuq – The Voice of Northeastern Kenya
Raisul Wasarihi hore ee Dalka Malaysia iyo Madixi hore ee Malaliyada oo lagu Eedeeya Falal Musuqmasuq
Star FM October 25, 2018
Raisul Wasarihi Najib Razak iyo madixi hore ee maliyada ayaa lagu eedeynaya inay si khaldan u isticmaleen lacag dhan $1.58bn oo ah lacag dowlada ay leedahay, Xili uu dacwada soo oogaha dalkasi ku dadaalayo cirib tirka musuqmasuqa.
Najib iyo Mohd Irwan Serigar, oo ahaa xoghayaha wasarada maaliyada ayaa ka soo hormuuqdeen maxkamada magalada Kula Lumpur manta si ay ooga jawaabaan lix dambi oo la xiriira kalsoonida dadweynaha inay burburiyeen.
Labada mas’ul ma aysan qiran dambiyada lagu eedeeyay. Dambiyadan ayaa midkiiba waxa uu soo jiidanaya 20-sano oo xarig ah,Ganaax iyo karbaash. Balse Jaib iyo Irwan lama karbaashi doono maadama ay da’a yihiin.
← Senetka oo la Dagaalamaya Eedeymaha ah inay Daboolaan Warbixintii Dhulka Ruaraka
Dalka Zambia oo Hakiyay Imtixanka Qaran iyada oo ay Jiraan Falal wax Isdaba Marin ah →